Muuse Biixi isaga waa u caadi inuu isla sawiro lana kulmo wasiirada dawlada dhexe - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muuse Biixi isaga waa u caadi inuu isla sawiro lana kulmo wasiirada dawlada dhexe
Horjoogaha maamulka Somliland ayaa sawir la galay wasiiro ka tirsan dawlada Somaliya oo uu aad u caayo kuna tilmaamo cadowgiisa koowaad. Hadaba talaabadan munaafaqada ah ee uu dhalinyar iyo hablo jeelka ugu taxaabay maxaa la gudboon shacabka masaakiinta ah ee uu maalin kasta u xiro waxay tageen Muqdisho.
”Muuse Biixi oo cuqdadu ku fogaatey waxaan odhan lahaa adigu is xidh ileen cid kaloo ku xidheysa ma jirtee ayuu yiri Xuseen Warsame oo ka faalooda arimaha Somaliland.
Waxa cad in Muuse Biixi diidi lahaa inuu isla sawiro wasiirada dawlada dhexe laakiinse wuxuu ku doodayaa in si kedis ah uu kula kulmey taas oo ah wax aan la aqbali Karin qaasatan dadkii uu xirey ayuu raaciyay Xuseen Warsame.
Wasiirada la sawiran waxa ku jira wasiirka arimaha dibedda Axmed Ciise, Wasiirka maaliyada Dr C/raxmaan Beyle, wasiirka kaluumeysiga C/llaahi Bidhaan.
Maxamed Sadiiq oo isaga uu xirey Muuse Biixi ayaa yiri mashruucii Somaliweyn ku qaraabasho ha inaga soo xirmo. Gudoomiyaha xisbiga Wadani oo isna kaga jawaabay la kulankan inaad saamo jiidiyo sanqadh tirasho kala daa.
Hoos ka daawo sawirka Muuse Biix iyo wasiirada
Shacab u dulqaadan waayay heeryada argagixisada oo weerar qaaday gobolka Gedo
Waxa dagaal culus ku dhexmaray gobolka Gedo gaar ...